Date My Pet » Zvayakanakira nezvayakaipira Dating Mukadzi Muduku
Zvayakanakira nezvayakaipira Dating Mukadzi Muduku
A achangopfuura tsvakurudzo kunoratidza kuti varume pasinei nezera ravo vanoda dating vakadzi kwavo kwemasikati 20s. Kana zvakawanwa pakati muongororo vari kuti vakatenda, kunyange varume vakuru 40s dzavo, 50S, kana 60s vanosarudza zvevakomana vakadzi vaduku zvikuru kupfuura pavo.
Paiva nenguva apo vanhu havana kugamuchira ukama pakati varume vakuru nevakadzi vaduku uye; zvisinei, zvino zvinhu zvachinja yekudyidzana uye ukama hwakadaro zvava runako zvakajairika. Nepo zvose nezvekudanana kwakadaro hakusi kunaka, havasi kuipa zvachose kana. Kukurukurirana pazasi rinoongorora dzimwe zvayakanakira nezvayakaipira kudoma vakadzi vaduku.
vakadzi vaduku, nokuda zera ravo, Kazhinji kuuya zvishoma mupfungwa mukwende. vakadzi vakura, pane rimwe divi, kazhinji vasava nyoro norunako somugumisiro kuupombwe zvakawanda nemateru nezvisingafadzi muupenyu. varume vakuru tsvaka kufambidzana navo vanogona kuzorodza navo, saka kashoma vanofarira vakadzi vari mupfungwa kuremedzwa.
Sevarume tikwegure, vane chiwanzo havazodi zvarisingazivi. Izvi zvinoita kuti kutarisa vakura zvikuru pane chii chaizvo. Kuva nomukadzi ari muduku zvikuru kunogona kubatsira munhu kudzokera akarasikirwa zest ake uye kuwana zvakakwana simba kurarama upenyu zvizere; kusimba mune vakadzi vaduku sokuti kushanda zvishamiso varume ava.
Kudanana vakadzi vaduku kazhinji kunobatsira vanhu kuona nyika nemamwe maonero. varume vakuru kazhinji kutanga kudavira kuti vaona zvakakwana. Apo varume ava vanotanga kufambidzana vakadzi vaduku zvikuru kupfuura pavo, avanotarisira kuva zvachose yakachena maonero. Vangatodaro kutanga kuita zvinhu havana kumboita pamberi.
Maturity nouchenjeri zvinogona chete kuuya apo munhu anova mukuru; mashoko inomirira wechokwadi vose varume nevakadzi. Hazvigoni kuti nyepera izvi zviviri. Kazhinji pachapera sesasaradzi riri pamusoro ukama pakati murume mukuru mumwe mukadzi muduku uye anotendeuka stale nokuda kwokushayiwa zvokunamata uye uchenjeri ekupedzisira.
Kana Unopinda noukama nomukadzi wechiduku zvikuru kupfuura iwe, ungaona zvakaoma kuti afare pamubhedha kunokonzerwa naye yakakwirira zvepabonde nemotokari. Vakadzi vazhinji mumamiriro ezvinhu akadaro vanotanga kutsvaka mumwe bonde mumwe. Nepo nokuita izvi mukadzi anogona kugutsa zvinodiwa dzeupombwe, nokuti murume muitiro uyu mumwe rake kunowedzera mikana yake dzichiri zvirwere zvepabonde.
Apo kufambidzana vakadzi vaduku zvikuru kupfuura pavo, Varume Anogonawo kunetswa nokuda kwokushaya yake kufarira pakugadzirisa pasi uye kuita mhuri. nhasi, Vakadzi vakawanda munyika dzavo kwemasikati 20s kana muduku pane kuti vanoda kunakidzwa noupenyu, vane novotel akakwana, uye kuwana mari yakawanda asati agadzirisa pasi. Sezvo munhu haasi muduku zvakare, munhu zvisiri nyore chaizvo kupa mumwe wake nguva zvikuru asati atanga mhuri.
Kufanana mamwe ukama, ukama pakati varume vakuru nevakadzi vaduku uye vane rakafanira dzavo uye demerits. saka, kuti ukama zvakadaro akabudirira vose vakaroorana vanofanira kunzwisisa mumwe tsime uye anofanira kuva kunoenderana mumwe.